प्रचण्डसँग हार्ने खेलमा कस्लाइ भिडाउला एमालेले ? – YesKathmandu.com
प्रचण्डसँग हार्ने खेलमा कस्लाइ भिडाउला एमालेले ?
सोमबार १७, साउन २०७३
सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमा हिजो आइतबार सकिएको छ । काग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नै सहमतीय सरकारको विपक्षमा भएसँगै यो प्रक्रियाका लागि दलहरुले कुनै प्रयास गरेका छैनन ।
काँग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । यस्तो अवस्थामा हार्ने जान्दा जान्दै प्रचण्डसँग मैदानमा को भिड्ला त ? अहिले राजनीतिक वृत्तमा चारजना नेताको नाम चर्चामा छ । ती हुन् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, एमाले स‌ंसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र माले महासचिव सिपी मैनाली ।
यसमध्ये पनि मैनाली र केसीको सम्भावना निकै न्यून छ । एमाले स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सबैभन्दा प्रवल सम्भावना रहेका पात्र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ नै हुन् । केही दिनअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा व्यवस्थापिका संसदमा दिएको मन्तव्यलाई काउन्टर गरेर चर्चामा आएका नेम्वाङ अहिले एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र हुन् ।
ओलीले उनकै सल्लाह र सहयोगमा संसदमा कदम चालिरहेका छन् । त्यसैले नेम्वाङले मानेको खण्डमा उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । यस पटक उम्मेद्वार बन्दा भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार हुने भएकाले पनि नेम्वाङलाई मनाउन सकिने उनको विश्वास रहेको बताइन्छ । बामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेद्वारका लागि ओलीका दोस्रो विकल्प हुन् । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले ओलीलाई एमाले अध्यक्ष बनाउनेक्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनेर पटक पटक शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालिसकेका गौतम प्रधामन्त्रीको कुर्सीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पात्र नै हुन् ।
काँग्रेस माओवादी भन्दा अर्को गुटबाट जो उम्मेद्वार बने पनि हार्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थमा आफ्नो पार्टीका नेताहरु प्रतिस्पर्धा गर्न तयार नभएमा ओलीका लागि बाहिरबाट विकल्प खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि बाहिरबाट विकल्प खोज्ने हो भने छुट्टै पार्टी अस्तित्वमा राखेर पनि प्रायस् एमालेकै छत्रछायाँमा देखिने माले महासचिव सिपी मैनाली र पुराना कम्युनिष्ट नेता एवम् राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी विकल्पको रुपमा रहेका छन् ।
प्रधामन्त्रीका लागि जो पायो त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नैतिकरुपमा पनि अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । केसी र मैनाली दुवै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने खालका पात्र हुन् ।
कांग्रेस र मधेसी नेतामा पत्नी र प्रेमिका मन्त्री बनाउन दौड !
प्रधानमन्त्री ओलीका लडाकुबाट अमरेश सिंहले भेटे दनक
संविधान जनतामा, नेताहरु पालैपालो दिल्लीमा
यी हुन लोकमानविरुद्धको महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु
दार्चुलामा यार्सा सङ्कलक ३५ हजार पुगे
देउवाले भनेः प्रचण्डबाट पार लागेन, अब मेरै नेतृत्वमा तीन तहको निर्वाचन गराउँछु
‘अध्यक्ष कमरेड कुन मापदण्डमा टेकेर मन्त्री छनोट गर्नुभयो ?’
राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता ६ दललाई मात्र
सचिवज्यू भारततिर लागेपछि ५० हजार कर्मचारीको सरुवा अन्यौलमा
एकता प्रक्रिया सकारात्मक, एकीकरणको मिति तोक्न सकिन्न – माओवादी केन्द्र
देउवाको भ्रमणमा चीनको पत्रकार सम्मेलन, त्यसपछि बोलाए मोदीले देउवालाई निवासमा
अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पायो
ओली र ठाकुरको गोप्य बार्तापछि फोरम अध्यक्ष यादव तर्सिए, बोलाए आकस्मिक बैठक
औषधिको डोज एक सयबाट असीमा झर्यो,शशांकको व्यथा उस्तै
भोज खुवाएर मतदाता आकर्षित गर्दै रौतहटका उम्मेदवार
आज निजामति कर्मचारी चुनावी मैदानमा
पुलिस अंकलको काम निर्दाेष मेरो बुवालाई जेलमा थुन्ने हो ?